သရဖူအသစ်တွင် အဆုတ်အအေးမိရောဂါဖြစ်ပွားမှု ရှိမည်ဟု သိရပြီးနောက် ကွမ်ကျိုးရှိ သရဖူအသစ်တွင် နမိုးနီးယား ဖောင်းကြွဓာတ်ခွဲခန်းသုံးရန် ထည့်သွင်းထား - Pandaily
Categories: Industry ကိုLucia Si ဇှနျ 3, 2021 ဇှနျ 3, 2021 မှာ Posted
Guangzhou ရဲ့ နျူကလီးယား စမ်းသပ်မှု စွမ်းရည်ကို တိုးမြှင့်ဖို့ (Nuclear Acid လို့ သံသယရှိတဲ့ လူသစ်တွေကို စိစစ်ထောက်လှမ်းလေ့ လာရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ ကွပ်ပျစ်လေးခု) အဖွဲ့ဟာ ဘိလပ် ကွပ်သစ်တွေကို ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ရာမှာ တရုတ်နိုင်ငံက Guangdong မြို့ကြီးကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ပထမအဖှဲ့ကတော့ ဗုဒ်ဓဟူးနမှေ့ာ တရားဝငျစတငျပွေးဆှဲမှာပါ။
ယငျးဓာတျခှဲခနျးမြားကို ကှမျကြိုးဓာတျခှဲခနျး၊ အမြိုးသားအသကျရှူဌာန၊ အမြိုးသားအသကျရှူဌာန၊ အမြိုးသားအသကျရှူဆိုငျရာရောဂါဆိုငျရာ လကျတှသေု့တသေနဌာန၊ အမြိုးသားအသကျရှူဆိုငျရာရောဂါဆိုငျရာ ပငျမဓာတျခှဲခနျး၊ Guangzhou Medical University of the First Hospital, Guangzhou LifeHealth Institute, KingMed Diagnoss Group နှငျ့ MGI Tech တို့ ပူးပေါငျး တညျဆောကျနခွေငျး ဖွဈသညျ။
တစ်အုပ်စုလျှင် ၂၁၀ စတုရန်းမီတာခန့် ကျယ်ဝန်းသော ယင်းဧရိယာကို စမ်းသပ်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ နမူနာပြုစုခြင်း၊ ဖြန့်ကျက်လေ့လာခြင်း စသည်တို့ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။
ယင်းဓာတ်ခွဲခန်းများမှ တစ်ရက်လျှင် နမူနာပေါင်း ၁၂၀,၀၀၀ ကျော် ရရှိနိုင်ပြီး ရလဒ်များကို ည ၆ နာရီမှ ည ၁၀ နာရီအထိ ထုတ်ပြန်မည်ဖြစ်သည်။ ကျန်းမာရေးလုပ်သားဦးရေ ၈ ယောက်လောက် လျှော့ချနိုင်သလို အလိုအလျောက် စက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေ မိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြင့် ထိရောက်မှုမြင့်မားတဲ့ အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။
အဆိုပါ ဓာတျခှဲခနျးတှငျ MGI နညျးပညာဖွငျ့ ထုတျလုပျသော ဆေးပစ်စညျးမြား၊ ကုမ်ပဏီထုတျ DNA တူရိယာမြားကို အဓိကထား စဈဆေးခွငျး၊ စမျးသပျ စဈဆေးခွငျးနှငျ့ ဆကျစပျပစ်စညျးမြားအား သုတသေနပွုခွငျး၊ ထုတျလုပျရောငျးခခြွငျး၊ အသကျမှေး ဝမျးကြောငျးမှုဆိုငျရာ ပညာရပျမြား ပံ့ပိုးခွငျး၊ စိုကျပြိုးရေး၊ ဆေးဝါးနှငျ့ ကနျြးမာရေး စောငျ့ရှောကျမှု အမညျခံ ဆေးဝါးမြား ထောကျပံ့ပေးခွငျးတို့ ပါဝငျသညျ။
သညျပရောဂကျြရဲ့ အကွီးအကဲ Lin Think က အရငျဘဏ်ဍာရေးဝနျကွီး သတငျးထောကျတှကေို ပွောရာမှာ သညျဓာတျခှဲခနျးဟာ ခွောကျနာရီအတှငျး မွနျမွနျဆနျဆနျတပျဆငျနိုငျပွီး နောကျခွောကျနာရီအကွာမှာ ဆေးဘကျဆိုငျရာစကျရုံတှအေားလုံးကို ပွနျလညျစဈဆေးဖို့ ထညျ့သှငျးထားပါတယျ။ တည်ဆောက်မှုကာလ တိုတောင်းခြင်း၊ ဗက်တီးရီးယား အမြှေးပါးများကို တိကျသော ဗက်တီးရီးယား ဓာတ်များ ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် ထောက်လှမ်းနိုင်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ၏ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း စသည့် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများ ရုတ်တရက်ဖြစ်ပွားခြင်း ဖြစ်သည်။
ဓာတျခှဲခနျးတှငျလညျး MGI နညျးပညာကို အသုံးပွု၍ သုတသေနပွုနသေော MGI ကုမ်ပဏီသညျ MGISP-NE384 Automatic Acid ကို တူးဖျေါနသေညျ။ ဒီစက်ဟာ အဏုမြူအက်ဆစ်တွေနဲ့ တွဲပြီး စမ်းသပ်ထုတ်ယူ တာဖြစ်ပြီး တစ်ရက်အတွင်း အဏုမြူသန့်စင်စက် ၃၈၄ လုံးအထိ နမူနာထုတ်ယူနိုင်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီအချိန်မှာ HEPA က Film System နဲ့ UV Lamp တွေကို ဓာတ်ခွဲခန်းပညာရှင်တွေအတွက် ဘေးကင်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ်။
Guangzhou Health Research Institute မှ လကျထောကျဌာနမှူး ပါမောက်ခ Yang Sang က “Influenza Press Laboratory features features features features and security in traditional laboratory factory factory features features and featurement က ပိုပွီးသငျ့တျောပါတယျ၊ schility schections. schections. ဒါဟာ နမူနာကောင်းတစ်ခု
ဂြှနျလ ၂ ရကျနကေ့ နမျ့စနျမွို့ရှိ ကနျြးမာရေးဝနျထမျးတဦးက ဓါတျခှဲခနျးတှငျ ဗှီဒီယိုဖိုငျဖွငျ့ အားပေးစကားပွောကွားခဲ့သညျ။ “ အဏုမြူအက်ဆစ်တွေ အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ စမ်းသပ်မှုတွေ အမြန်ဆုံးဖြတ်တောက်ဖို့ ကွင်းဆက်တွေ ဖြတ်ဖို့ကတော့ ကွမ်ကျိုးရဲ့ ပထမဦးစားပေးဖြစ်ပါတယ်.. ကွမ်ကျိုးမှာရှိတဲ့ ဓါတ်ခွဲခန်းကတဆင့် ဓါတ်ငွေ့တွေ ထွက်ရှိတဲ့ ဓါတ်ငွေ့တွေကို ကျနော်တို့အားလုံး စုစည်းပြီး ဓါတ်ခွဲခန်းတွေ Mobile Class ဓါတ်ခွဲခန်းတွေမှာ ဓါတ်အားနဲ့ တိုက်ဖျက်ကြပါစို့!”
Guangzhou မှာလညျး တငျးကပျြတဲ့ လညျလိမျရောဂါတိုကျဖကျြမှုတှေ လုပျဆောငျခဲ့ပါတယျ။ “ Chinese Daily” ရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကစပြီး Shenzhen PAN အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်ကနေ Guangzhou နဲ့ Guangyang ကို ခရီးသွားတွေ မေးမြန်းမယ့် Green Health Code နဲ့ ဘော်ဒါဆောင်တွေကို ၇၂ နာရီအတွင်းမှာ စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။